Xoghayaha Arimaha Dibada ee Ingriiska oo Booqasho ku Jooga Ethiopia – Rasaasa News
Jul 11, 2011 Xoghayaha Arimaha Dibada ee Ingrii oo Booqasho ku Jooga Ethiopia
Xoghayaha arimaha dibada ee dalka Ingriiska William Hague, ayaa booqasho ku tagay dalka Ethiopia isaga oo kulan la qaadan doona R/wasaaraha Ethiopia Meles Zinawi iyo ku xigeenkiisa ahna wasiirka arimaha dibada Hailemariam Dessaleg, waxayna ka wada xaajoon doonaan xidhiidhka labada dal, cawiimada iyo arimo la xidhiidha gabalka, oo ay ka mid tahay Libiya, Sudan iyo Somaliya.
Kolkii uu gaadhay Ethiopia, xoghayaha Arimaha dibada ayaa sheegay in xidhiidhka Ethiopia iyo UK uu yahay mid xoog badan, uuna ku salaysan yahay dano badan oo ay wadaagaan labada dal.
Sida uu warfidiyeenada u sheegay xoghayuhu dawladiisu waxay xili dhaw labanlaabtay kaalmadii ay hore u siin jirtay Ethiopia, taas oo ku salaysan horumarinta xooga leh ee ay ku talaabsatay. Tani waxay ka dhigaysaa Ethiopia dalka ugu badsada kaalmada uu Ingriisku siiyo aduunka.
“Waxaa intaas dheer in Ethiopia iyo Ingriisku ay so dhaw uga wada shaqeeyaan amaanka gabalka, arintaas oo uu R/wasaare Meles door muhiim ah ka ciyaaro Waqooyiga iyo Koonfurta Sudan” ayuu yidhi Hague.
Xoghayaha arimaha dibada ee Ingriisku wuxuu kala xaajoon doonaa R/wasare Meles iyo ku xigeenkiisa ahna wasiirka arimaha dibada Hailemariam arimo badan. Arimahaas oo ay ka mid yihiin sii xoojinta xidhiidhka labada dal iyo sii wadida ka wada shaqanta u cago dhiga siyaasada Sudan iyo Somaliya, sidii ay u dagi lahayd siyaasada dalka Libiya iyo sidii ay Ingriisku si taabo gal ah uga jawaabi lahaa kaalmooyinka xaalada binaadanimo ee geeska Afrika.
Daawo Muuqaalka Wariyeyasha Sweden oo Tababar Ciidan ku Qaadanaya Gabalka Ogaden